Dhageyso: Wasiirka Arimaha Gudaha XFS oo baaq nabadeed u diray Beelaha ku dagalamaya Gobolada Galgaduud iyo Sh. Dhexe – Walaal24 Newss
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa baaq nabadee u diray dagaal beeleeyada ka soo cusboonaaday Gobolka Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe.
Wasiir Sabriye oo Shir Jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaalada ka socda deegaanada Burdheere ee duleedka Cadale iyo Xeeraale ee Gobolka Galgaduud uu aad uga xun yahay, isla markaana u jeediyay baaq nabadeed beelahaasi dagaalmaya.
Wasiirka ayaa Beelaha dagaalamaya dib u heshiisiinta ugu baaq in ay si deg deg ah ku joojiyaan Dagaalada ka socda Gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe, sababayna dhimasho iyo dhaawac.
Sidoo kale waxa uu fariin u diray Wasiir Sabriye Waxgaradka iyo Ganacsatda kasoo kala jeeda beelaha ay dirirto dhexmareyso, isagoona u jeediyay in ay ku baxaan oo ay wax ka qabtaan arrimahaas lana joojiyo xadada, isla markaana Ciidamada kala qaado.
Ugu dambeyntii Wasiirka ayaa sheegay in Xukuumadda ay ka qeyb qaadan dooto sidii loo joojin lahaa dagaalada ka soo cusboonaaday markale deegaanada Xeeraale iyo Burdheere ee Gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe.
Halkan hoose ka dhageyso baaqa Wasiir Sabriye:-
Hay’adda NISA oo faah faahisay howlgal lagu dilay dagalamayaal ka tirsan kooxda Alshabaab
Daawo: Ra’iisal wasare Khayre “Inaan marka hore aqbalno inaan dhageysano talooyinka dadka ay saameyndoonto go’aamada aan gaareyno”